people Nepal » २०७५ मा क–कसका पुस्तक आउँदै छन् ? २०७५ मा क–कसका पुस्तक आउँदै छन् ? – people Nepal
Posted on April 29, 2018 by Tara Nidhi
काठमाडौं, वैशाख । पुस्तकको बजार एकनासको हुँदैन । कहिले नाम चलेका लेखक नै बिक्दैनन् । कहिले नयाँ लेखकलाई पनि पाठकले औधी मन पराइदिन्छन् । तर, लेखक बुद्धिसागरको भनाइमा ०७४ सालमा राम्रा पुस्तक आए ।
सयौँ पुस्तकमध्ये पाँचवटा पुस्तक मात्र उत्कृष्ट आए भने त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने उनको तर्क छ । जस्तो कि अंग्रेजी भाषामा एक वर्षमा प्रकाशन हुने हजारौँ पुस्तकमध्ये १०/१२ पुस्तकको मात्र चर्चा हुन्छ ।
नयाँ लेखकका कृतिलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरिरहेको बुलबुल प्रकाशनले गत शनिबार जिएस पौडेलको उपन्यास एक सर्को माया विमोचन गरेको छ । उपन्यास माल्दिभ्सको पृष्ठभूमिमा लेखिएको छ । बुलबुलले नायिका सोभिता सिंखडाको उपन्यास वरांगना पनि प्रकाशन